Miyay doonayaan taageerayaasha AC Milan inuu Berlusconi madaxwayne sii ahaado? (Codeeyn la qaaday) – Gool FM
Miyay doonayaan taageerayaasha AC Milan inuu Berlusconi madaxwayne sii ahaado? (Codeeyn la qaaday)
Raage June 1, 2016
(Milano) 01 Juunyo 2016 – Xilli lagu jiro wada xaajoodyo lagu iibsanayo kooxda AC Milan oo soconaya ilaa bartamaha bishan Juunyo ayaa waxaa dhowr mar hadlay Berlusconi oo sheegay inuu doonayo inuu madaxwayne fulineed kasii ahaado kooxda xitaa haddii laga iibsado 70%.
Haddaba, taageerayaasha Rossoneri oo aan badanaa arrintaa u guuxin ayaa waxaa codeyn u sameeyay webka MilanNews.it waxayna noqotay sidii la filayey oo 76.8% waxay soo jeediyeen in gebi ahaanba la bedelo maamulka naadiga kaddib iibka la sugayo.
Halka tiro yar oo ah 23.1% ay qabaan inay fiican tahay inuu Berlusconi sii joogo ugu yaraan sanadaha yar ee soo aaddan.
TOOS u daawo: Belgium vs Finland - LIVE
DAAWO: Wax kasta oo aad uga baahan tahay guruubka B ee Euro 2016